Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo kulan albaabada u xiran ku yeeshay Villa Soomaaliya (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo kulan albaabada u xiran ku yeeshay Villa Soomaaliya (SAWIRO)
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maalintii shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa kulankii ugu horeeyey xalay la yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Kulankaasi oo ahaa mid ay saxaafadda dibad-joog ka aheyd ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxayna labada mas’uul kulankooda uga hadleen xaaladda guud ee dalka iyo guusha uu madaxweyne Farmaajo ka gaaray doorashadii 8-da bishaan ka dhacday magaalada Muqdisho.
Axmed Madoobe ayaa ka maqnaa doorashada ka socotay magaalada Muqdisho, xilli madaxda kale ee maamul goboleedyada dalka ay magaalada Muqdisho ka wadeen u ololeynta qaar kamid ah musharixiinta u tartameeysay xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Axmed Madoobe ayaa haatan magaalada Muqdisho u jooga, si uu uga qeyb galo xafladda caleemo saarka ee madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Xafladda caleemo saarka ee madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maalinta berri ah ka dhici doonto magaalada Muqdisho, waxaana kasoo qeyb-gali doonno madax caalami ah oo xafladaasi lagu casuumay.